Updated Timetable – Mandalay International Science Academy
September 3, 2020 Wai Yan
As school closures have been extended until further notice, we have decided to add extra periods to our students’ timetables, in order to ensure that we can complete the curriculum within the required timeframe.
For primary students, this means one extra afternoon lesson, andastudy hour, during which time they can catch up with assignments under the guidance of their Assistant Teachers.
For secondary students, this means two extra periods in the afternoon.
We are confident that by now even the youngest students have developed enough independence to be able to follow the courses without continuous supervision.
Also, we have included an extended lunch break, so that students can give their eyesarest and avoid too much continuous screen time,
Updated timetables have been uploaded in classrooms, sent by email, and can also be collected at the school office.
ကြောငျးပိတျထားရမညျ့ကာလအား နောကျထပျ ထပျမံ အသိပေးကွညောခကျြ မထုတျမခွငျး ယာယီ တိုးမွှငျ့လိုကျပွီး ဖွဈရာ ကြောငျးသငျရိုး သငျခနျးစာမြား အခြိနျမီ ပွီးစီးနိုငျစရေနျအတှကျ စာသငျခြိနျမြားအား မဖွဈမနေ တိုးမွှငျ့ပေးရနျ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါသညျ။
မူလတနျး အတနျးမြားအတှကျ နလေ့ညျပိုငျးတှငျ စာသငျခြိနျ တဈခြိနျ နှငျ့ စာကွညျ့ခြိနျ study hour တဈခြိနျ ထပျတိုးပါမညျ။ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြားသညျ study hour အခြိနျအတှငျးတှငျ လကျထောကျ သငျကွားရေး ဆရာမမြား၏ ကွီးကွပျ ကူညီမှုဖွငျ့ သူတို့အား တာဝနျပေးထားသော အိမျစာမြား သငျယူလလေ့ာနိုငျပါမညျ။
အလယျတနျးကြောငျးသားကြောငျးသူမြား အတှကျ နလေ့ညျပိုငျးတှငျ စာသငျခြိနျ ၂ ခြိနျ ထပျတိုးမညျဖွဈပါသညျ။
ယခုအခါတှငျ ကြောငျးသားကြောငျးသူက‌လေးမြားသညျ လူကွီးမြား၏ စောငျ့ကွပျ ကွညျ့ရှုမှုမပါဘဲ မိမိတို့ ကိုယျတိုငျ လလေ့ာသငျယူနိုငျကွပွီဟု ယုံကွညျပါသညျ။
ထို့ပွငျ ထမငျးစားနားခြိနျကိုလညျး လုံလုံလောကျလောကျ အခြိနျပိုပို ပေးထားသညျ့အတှကျ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြားအနဖွေငျ့ မကျြစိကို ကောငျးစှာ အနားပေးခြိနျ ရမညျ့ အပွငျ screen time ကိုလညျး လြော့ခနြိုငျမညျဖွဈပါသညျ။
အတနျးစာသငျခြိနျ အခြိနျဇယားကို online စာသငျခနျးမြားသို့ ပို့ထားပွီးဖွဈပါသညျ။ email မှလညျး ပို့ထားပွီးဖွဈပါသညျ။ ကြောငျးရုံးခနျး၌လညျး လာရောကျယူနိုငျပါသညျ။
ထပျမံဆှေးနှေးတိုငျပငျလိုပါက အောကျဖျောပွပါ ဖုံးနံပါတျမြားကိုဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါသညျ။ 02-4072753၊ 09-43060027၊ 09-43060423 ။
ကြောငျးအုပျရေးအဖှဲ့ သို့မဟုတျ ကြောငျးဝနျထမျးမြားနှငျ့ လူခငျြးတှေ့၍ ဖွဈစေ online မှဖွဈစေ ကွိုတငျခြိနျးဆို ဆှေးနှေးနိုငျပါသညျ။
MISA ကြောငျးကို ရှေးခယျြပေးသညျ့အတှကျ အထူးကြေးဇူးတငျပါသညျ။
ကျောင်းပိတ်ထားရမည့်ကာလအား နောက်ထပ် ထပ်မံ အသိပေးကြေညာချက် မထုတ်မခြင်း ယာယီ တိုးမြှင့်လိုက်ပြီး ဖြစ်ရာ ကျောင်းသင်ရိုး သင်ခန်းစာများ အချိန်မီ ပြီးစီးနိုင်စေရန်အတွက် စာသင်ချိန်များအား မဖြစ်မနေ တိုးမြှင့်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
မူလတန်း အတန်းများအတွက် နေ့လည်ပိုင်းတွင် စာသင်ချိန် တစ်ချိန် နှင့် စာကြည့်ချိန် study hour တစ်ချိန် ထပ်တိုးပါမည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် study hour အချိန်အတွင်းတွင် လက်ထောက် သင်ကြားရေး ဆရာမများ၏ ကြီးကြပ် ကူညီမှုဖြင့် သူတို့အား တာဝန်ပေးထားသော အိမ်စာများ သင်ယူလေ့လာနိုင်ပါမည်။
အလယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများ အတွက် နေ့လည်ပိုင်းတွင် စာသင်ချိန် ၂ ချိန် ထပ်တိုးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူက‌လေးများသည် လူကြီးများ၏ စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုမှုမပါဘဲ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် လေ့လာသင်ယူနိုင်ကြပြီဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ထို့ပြင် ထမင်းစားနားချိန်ကိုလည်း လုံလုံလောက်လောက် အချိန်ပိုပို ပေးထားသည့်အတွက် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် မျက်စိကို ကောင်းစွာ အနားပေးချိန် ရမည့် အပြင် screen time ကိုလည်း လျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အတန်းစာသင်ချိန် အချိန်ဇယားကို online စာသင်ခန်းများသို့ ပို့ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ email မှလည်း ပို့ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းရုံးခန်း၌လည်း လာရောက်ယူနိုင်ပါသည်။
ထပ်မံဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ ဖုံးနံပါတ်များကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 02-4072753၊ 09-43060027၊ 09-43060423 ။
ကျောင်းအုပ်ရေးအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ကျောင်းဝန်ထမ်းများနှင့် လူချင်းတွေ့၍ ဖြစ်စေ online မှဖြစ်စေ ကြိုတင်ချိန်းဆို ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
MISA ကျောင်းကို ရွေးချယ်ပေးသည့်အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ko kyaw maung htwe7months ago
study hour တခြိနျပါတာ အလှနျအဆငျပွပေါတယျ ။ကလေးနားမလညျတဲ့အိမျစာတှေ အတှကျမေးလို့ရသှားလို့ပါ။
Leaveareply to ko kyaw maung htwe Click here to cancel the reply
©2021 MISA · Mandalay International Science Academy